Sarimihetsika sarimihetsika vaovao 'diso' no mampiseho ny lohan'ny mpihaza mandehandeha
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Sarimihetsika sarimihetsika vaovao 'diso' no mampiseho ny lohan'ny mpihaza mandehandeha
by Timothy Rawles Janoary 9, 2021
nosoratan'i Timothy Rawles Janoary 9, 2021
Fihodinana diso: Ny Fototra namoaka clip fijery voalohany tamin'ity herinandro lasa ity. Vao mitondra ny lohateny hoe Fihodinana diso ny sarimihetsika dia misy an'i Matthew Modine, Charlotte Vega, ary Bill Sage; kasaina havoaka amin'ny sinema (sy VOD tsy voafetra) ho an'ny iray alina monja amin'ny 26 Janoary.
Ilay clip dia IGN manokana ary manome fahazavana kely amin'ireo tanora mpilalao izay very very any an'ala ary manara-dia ny volon'ondry mpihinana kanibalista. Ny mpamorona andiany Alan B. McElroy dia niverina nanoratra ity ekipa reboot ity raha i Mike P. Nelson (The Domestics) mitarika.
Ity clip eto ambany ity dia mametraka ny tantara mampiseho vondron'olona mandeha mitsivalana mamakivaky ny Appalachian Trail. Tsy misy na aiza na aiza, misy vatan-kazo goavambe navoaka ary manomboka mihodinkodina aoriany toy ny famonosana medieval. Rehefa nandositra ny vela-pandrika izy ireo, dia toherina tamin'ny hazo ny tovolahy iray (Vardaan Arora) raha nitodika nankany aminy ireo hazo hazo tsy voafehy, nanondro ny fahafatesany feno rà.
Ny franchise, izay nanomboka tamin'ny taona 2003, dia manana (hatreto aloha) ny tohiny dimy, samy manana ny tsikera isan-karazany. Amin'ny ankapobeny, ireo mpankafy dia mahatoky amin'ilay mpilalao an'i Eliza Dushku sy Desmond Harrington tany am-boalohany. Last Resort no fidirana farany tamin'ny andiany tamin'ny taona 2014. Nanomboka ny fakana sary tamin'ny volana septambra 2019 talohan'ny areti-mandringana.
Rehefa mandeha ny mpamadika fandrika, ny Fihodinana diso franchise nanomboka mahery. Na dia nindramina tamin'ny tantara hafa aza ilay foto-kevitra, dia talanjona tamin'ny famonoana sy ny kalitaon'ny famokarana ireo mpankafy horohoro. Amin'ny sarimihetsika taty aoriana, ny kanibaly, samy manana ny fomba famonoany ho lasa biby goavam-be tsy hay hadinoina izay nanitatra ny androm-piainan'ny franchise.
Izany farany Mitodiha tonga amin'ny fotoana izay mangetaheta ny horonan-tsary mahatsikaiky mangetaheta horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina nefa nohajaina tao an-trano. Trano famokarana Alemanina Constantin Films novokarina Fihodinana diso miaraka amin'i Saban naka ny zon'ny fizarana amerikana avaratra tamin'ny faran'ny taona lasa.
Fihodinana diso hivoaka mandritra ny iray alina ao amin'ny sinema, ary VOD, amin'ny 26 Janoary.
Fihodinana disoDiso diso: Resort farany
Famerenana indray mandeha 'diso' indray alina iray ihany no mandeha ny lisitra tapakila
FAMERENANA: Sary an-tsary ny sary 'Ice Cream Man' dia mendri-piderana